Bond, Patrick Translation ka-Manzi, Faith (2014) Which way forward for the BRICS in Africa ? (Iyiphi indlela eyaphambili ngeBRICS eAfrika?
Patrick Bond First Published in Pambazuka 11 April 2014
Iyiphi indlela eyaphambili ngeBRICS eAfrika?
Lombhalo ubalulekile ngoba ubuka isimo esingesihle mayelana neBRICS ( okungamazwe iBrazil, iRussia, India,iChina kanye neNingizimu Afrika) kanye nezinjongo zabo zokuzitapela kwimikhiqizo yezwekazi laseAfrika.Izinhlangano ezimelene nobulungiswa kwihlalakahle yabantu kufanele ziqale ngokuhlaziya okusemqoka ngezimo abahlangabezana nazo ngokuhlanganyela ukuze kukhule umzabalazo omelelene neBRICS.
Leliqembu lalamazwe kusukela kwiBrazil-Russia-India-China-neNingizimu Afrika lahlangana eThekwini sekuphela inyanga kaMasho ngonyka odlule, bonke bekhuluma ngokuzimisela kwabo ngabazokwenza kulelizwekazi nasemhlabeni wonke. Kodwa izinto azihambanga kahle kusukela lesosikhathi. Izimo ezinqala kakhulu mayelana nezezimali, ezombusazwe ezibhekelene nezemvelo, ezemibutho zivele obala kunyaka olandele – eAfrika kanye nasemhlabeni jikelele.
Lombhalo oqale washicilelwa kwiPambazuka – ubhalwe ngokuhlanganyelwa noKhadija Sharife – futhi ubhekene neminyakazo eyenzeka eAfrika yonkana yizimboni kanye nongxiwankulu besebenzisa iBRICS, begxile kakhulu eningizimu neAfrika, ikakhulukazki eZimbabwe, eAngola kanye naseDRC. Lokhu engxenye kubonisa lapho sikhona ngesikhathi sibhala, kodwa futhi ngoba iNingizimu Afrika kungekudala-nje iphumele obala yathi yona ikhona impela iminyakazo eyenzayo “hayi nje ukuba isango’ lokuvulela amanye amazwe ukuze iBRICS ithsale izimali eAfrika, ngakho-ke iqale ngamazwe asondelene neTheku.
Njengoba sizobona, lokukutshalwa kwezimali kakhulu okulindelwe kwizingqlasizinda eningizimu neAfrika kugxilwe ezimbonini zokumbiwa phansi, njengoba kwakwenza abamhlophe besabusa lelizwekazi. Ngenyanga kaMashi ngo2013, lokho kwabonakala ngokumenyezelwa kwingqungqthela yeBRICS ukubolekwa kweTransnet izigidigidi ezingu$5 yibhange laseChina; futhi lokho kuyakhombisa ukuthi emva konyaka, lokhu kutshalwa kwezimali ezingaka kuTransnet ikona okukhulukazi okwake kwenzeka: ngokuchitha imali eyizigidigidi ezingu$4.8 kuthengwa amagumbi ezitimela.
Lawo magumbi ayekade akhiwa lapha eNingizimu Afrika esikhathini esedlule; kodwa manje lawa abalulekile okuqala ayinkulungwane (1000) azothengwa ezweni laseChina, ngoba azokwazi ukuthutha amakhoyintena amane ngesikhathi esisodwa. Ukumbiwa kwechweba eThekwini ukuze kubhekwane nemikhumbi enamakhoyintena angaphezulu kuka15 000 ilokhu-ke futhi okunye ukutshalwa kwezimali okulandelayo okukhulu okuzokwenziwa nguTransnet, futhi akungabazeki ukuthi ukuxhaswa ngezimali kuyobe kumbandakanya imali ekweletwe ebhange laseChina.
Ukuthembela ezweni laseChina, empeleni, kungukuthatha amashansi ngabahlelayo kumasipala waseThekwini kanye nababhali Bohlelo Lokuthuthukisa Izwelonke kumnyango wokuhlela ngaphansi kukaTrevor Manuel. UManuel ulundelwe ukuthi awushiye lomnyango emva kokhetho langomhlaka7 kuMeyi, njengoba esebuse iminyaka engamashumi amabili – ikakhululazi njengongqongqoshe wezezimali owaduma kabi ngokubhekelela ongxiwankulu – futhi kungase ahambe azimbandakanye nokuhweba noma inhlangano exubile. Nkokwesibonelo-nje, usekwe wasikazwa ngokuba ngohamba phambili kwimisebenzi ephambili ezinhlanganweni zeBretton Woods.
Indlela yokulawula umhlaba ingaphansi kwengcindezi enkulu, futhi uManuel ngeke akwazi ukwenza umehluko. uma sibheka-nje ukukhinyabezeka kwamazwe ahamba phambili kwiG8, izimboni ezinkulukazi ezisabalele emazweni amaningi kanye nezingqungquthela ezifana neDavos World Economic Forum, iBretton Woods Institutions, the United Nations Framework Convention on Climate Change kanye neUN Security Council, kanye neWorld Trade Organisation. Isidingo esokuthi amazwe aseNingizimu ukuthi amelane nokungabikhona kobulungiswa kulokukuhlanganyela obunhlakanhlaka akubuzwa nokubuzwa, futhi ‘neBhange laseNingizimu’ kanye neqembu lokuhweba leALBA elaqalwa ngumongameli ongasekho emhlabeni waseVenezuela uHugo Chavez belingaba isibonelo esinamandla, ukuba iNingizimu Afrika nayo yazimbandakanya, Ngesikhathi ithola ithuba lokuzihlanganisa yenqaba.
Kodwa-ke, kulonyaka odlule sekube khona iminyakazo embalwa enganika umuntu ithemba ngaphakathi kwiBRICS: indlela elndelekayo ngaphakathi kwiG20 ukuvimba ukusabisa kweWshington ngokuthi izohlasela iSyria ngenyanga kaSeptemba kunyaka odlule, kanye nesethembiso sezizinda ezintsha ze-niternet ezingezukudlula eMelika kanye nezimboni zezimali ezinobulungiswa (kodwa-ke noma bungekho ubufakazi obanele bokuthi kuyobakhona ushintsho lwangempela oluqhamuka kulabongxiwankulu abasabalala emazweni)
Kodwa-ke, noma ikuphi-ke futhi, iBRICS cishe ihluleke kukho konke, futho okumbandakanye ngokufuna ukusabalalisa ukubusa ngobungxiwankulu ngezimboni okumelene nabathi bona abafuni ukukwenza. Mayelana nomzabalazo kanye nokuzimbakanye kwezinhlangano ezimelene neBRICS ezizibiza ngokuthji ibrics eqhamuka kubantu, umcabango esingeke siwubalekele kodwa futhi okungakasondelwa kakhulu kuwona ukuthi ungase wenzeke.
Ngabe abezombusazwe bamazwe eBRICS, kanye nezinhlangano zemiphakathi kanye nabahwebi zisesimweni esikahle sokubhekana nezingqinamba ezibhekene nomhlaba, njongokuqhubekayo, ukusabalala kwenkinga yokungabikhona kwemali? Kwenzeka kanjani ukuthi amazwe amathathu akuBRICS – iBrazil, i-India kanye neNingizimu Afrika –abe ngahamba phambili kwizimakethe ezisaqala‘Ezintekenteke Ezinhlanu’ ezabhidlika phakathi konyaka ka2013, kwathi futhi ngokuqala konyaka ka2014 elinye izwe nalo lalandela – iRussia – ngenxa yokwesaba okuqhamuka ekutheni ayisakwazi ukuba notho engalusho eUkraine kanye nokuthatha ngokungemthetho iCrimea?
Lokho kukuqonde ukuba kube ‘ilona lizwe elizokwakha’ ngokuhlanganyela kwuleminyake eyikhulu, ngokusho kukaJim O’Neill ngonyaka ka2001. Kodwa emva kweminyaka eyishumi nangaphezuludlwana, wabuyekeza lokukuqagela wabala izwe elilodwa kuphela kwiBRICS elalifanele ukuba yilo elizokwakha: iChina.
Ngaphandle kokungabaza, ukuhlasela kweChina ngokutshala izimali eAfrika kulokhu kukhula ngokweqile minyaka yonke, kodwa manje umzabalazo omelene nalokhu ukhona kakhulu manje kunakuqala. Empeleni phela ubudlelwane phakathi kweze laseChina kanye neNingizimu Afrika kwakuzovula ‘uthelawayeka wesango’ – kodwa lokhu akhambi kalula. Umbutho Wempi WaseNingizimu Afrika wazenza isilima eCentral African Republic ngaphambi-nje kwengqungquthela yeBRICS yango2013, ivikela ‘abahwebi baseGoli’ (okumbandakanya nabanobudlelwano neqembu elibusayo uKhongolose) ngokusho kwamabutho abuyela ekhaya edinwe eganwe unwabu ngokwakubizwa (nguhulumeni omusha) ngokuthi kwakuwuhambo ‘elingahlangene nokubhekelela okwaseNingizimu Afrika kodwa okokuyozimbandakanye nezimpi zamanye amazwe bese bethola imali ngalokho’.
Inkinga enkulukazi ukungabikhona kokuhlanganisa kahle izimali, njengoba kwabonakala ngezigidigidi ezingu$100 eyayigciniwe eThekwini noma n gesikhathi sengqungquthela yeG20 eSt Petersburg ngonyaka odlule ngenyaka kaSeptemba. Phakathi nenyanga kaJuly, emva umdlalo wokugcina weNdebe Yomhlab kabhutshuzwayo erIO DE Janeiro, abaholi abahlanu beBRICS (okungase kwenzeke kuhlanganise noNdunankulu waseIndia kwiqembu lezombusazwe lontamolukhuni eisanda kuphumelela lamaHindu iBJP) naye uyofika aye eFortaleza eze kwenye ingqungquthela.
Kungase kwenzeka bagcine sebewenzile umnyakazo wezezimali, ikakhulukazi umangabe iRussia ebehekene nokunswinywa ngamazwe aseNyakatho ngokuhlasela iCrimea? UMangebe lokho kungeke kwenzeke, singalokhu njalo silindele ukukhothamela umnotho womhlaba kwenziwa iAfrika okuqhubekayo ukuyenza ibehlwempu kakhulu futhi kube kulokhu kuqhutshekwa kukhulunywa “NgeAfrika Evukayo” ngokuthi kulokhu kukhulunywa ngemali yezwe emyukayo – ngaphandle kokubhekelela ukuthi lokho kuchaza ukutshontshwa kwemikhiqizo embiwa phansi ngaphandle kokukhokhisa okusobala okumbi: umangabe lemikhiqizo engakwazi ukuqalwa kabusha isithathiwe, ayiphinde ibuye (noma iphinde ikhule).
Isingathekiso esingachaza ukuhlukunyezwa umhlaba komnotho waseAfrika umndeni umlando wawo wobucwebe ababeshiyelwe wona atholwa ngumshana owayedakiwe (futhi kungenzeak kube isakhamuzi saseNingizimu Afrika, uma sesibheka indlela enobuxhwanguxhwangu ayeziphethe ngayo). Udayisa lobubucwebe ngemali ephansi kakhulu, athenge obunye futhi utshwala, bese ethatha imoto yasekhaya ayicekele phansi, ebulala abantu abangenacala ababezimele. Umndeni manje awusenazo izinsiza, kodwa uyaqhubeka ukukhokhela izikweletu ezinkulu kubantu abafa kwingozi yemoto (kanye nokulima komshana esibindini):isiqalekiso somnotho, senzehlalakahle, sezemvelo kanye nezembusazwe.
IPITOLI LBEKA IDOLOBHA LASEGOLI PHAMBILI UKUTHI KUQHUTSHEKWE NOKUTHI LIPHANGWE NGOKWEDLULELE
Inqubo enjani lena ekwazi ukuvumela loluhlobo lokucekela phansi? Isimo sokubuswa ngokusabalala kwezomnotho waseNingizimu Afrika kubalulekile, ngoba ukungenelela kweNingizimu Afrika ezimakethe zaseAfrika kwakungumcabango obhekelele ezombusazwe wendawo.
Uma kubekwa ngokusobala okulula yinkampani yobunhloli yaseTexas iStratfor ngonyaka ka2009 kumyalezo owawujikeleza ngaphakathi (njengoba kwavezwa iWikileaks ngonyaka ka2013), ‘Umlando weseNingizimu Afrika ulawulwa ngukuhlanganyelwa wukuncintisana kanye nokukipita phakathi kwezidingo zasekhaya kanye nasemazweni aphesheya ezixhaphaza imikhiqizo yezokumbiwa phansi yalelizwe. Noma-ke liholwa nguhulumeni wentando yeningi, okubalulekile ngezemnothjo waseNingizimu Afrika ukuthi ugcinwe nguhulumeni wongxiwankulu ovumela ukusabalala kwamandla abasebenzi kanye nemali kusuka futhi kuya eningizimu neAfrika, kanye nokugcinwa kwezombutho onamandla okwaziyo ukuyofinyelela eningizimu kanye nephakathi nendawo lezwekazi laseAfrika.
Ngokuqinileyo, uStratfor uthi yena, ‘IAngola kanye neDRC izona zindawo ezifunwa kakhulu. INingizimu Afrika inesikhathi eside ezimayini zamadayimane alamazwe, kodwa yahluleka ukuzilawula okunganemkhawulo. Iningizimu Afrika ike yaba nakho ukuphumelela ezimayini zaseDRC, lapho ifinyelela khona ngokudlula esifundazweni sebhande lecopper eZambia. IAngola kanye neDRC nabo baxanisekile ngokuthuthukisa ezokumbiwa kwedayimani ezindaweni ezikude ngaphakathi emazweni abo, lapho ukumbiwa phansi kwemikhiqizo kusenziwa abantu abangebona ochwepheshe kakhulu. Ubuchwepheshe kanye nemali yaseNingizimu Afrika kungasetshenziswa ukuthuthukisa lamazwe womabili ezindaweni zakhona ezicebile ngedayimane ezingakathintwa, kanti futhi nohulumeni kaKhongolose uyazi ukuthi ungakwazi ukuba nomthelela ukuletha izimboni zaseNingizimu Afrika ukuthi zithole izimvume zokumba.’
Ngamanye amazwi, ngokushe kwentatheli ehlala ezweni edolobheni laseNairobi uCharles Onyango-Obbo ngonyaka odlule wathi, ‘INingizimu Afrika igqoka isudi yayo, yapthatha isikhwama sayo esiqumbile, yase ifika kulelizwekazi. Ukuphumela ngaphandle ngokusabalala akuzange kushintshe kuyo yonke leminyaka. Bahlale bedinga ukuthi ojenene, amakhosana kanye nabahwebi bahole ngesiliva negolide, uma bezoqhubeka bexhasa uhulumeni wongxiwankulu kanye nababusi emuva ekhaya. Izindawo ezifana neDRC, lapho kugcwele khona isiliva negolide eliningi iyohlala njalo iyindawo lapho beya khona – noma ngabe abasabalela khona ngokubusa ezomnotho ngabaseAsia, eEurope, eMelika noma abaseAfrika.
Njengoba imali idudulwa futhi idonswa, ukusukela kuya eningizimu neAfrika, ‘isiliva negolide’ eliholwayo laqala labaluleka ngesivinini ukuqinisekisa ukuthi amabhuku ezimali zezimboni zaseNingizimu Afrika ziyabhalansa. Ukuvuleka okokuqala kweNingizimu Afrika kumnotho womhlaba kwakuyinto yokuqala ebalulekile, kodwa-ke, okwaba nothelela ukuthi nayo ifike nokubuye kuphambane.
Sekuphela unyaka ka1993 lapho izindonga zobandlululo zaseziwa, uMandela wazibophezela kwizivumelwano ebusa kuhulumeni wokuqala wentando yeningi ukukhokhela izikweletu ezazidaleke ngesikhathi sobandlululo, nokuthi futhi iBhange Lezwe laseNingizimu Afrika livikeleke kwintando yeningi nokuthatha isikweletu kwiIMF esasinemibandela. Ngonyaka ka1994, iNingizimu Afrika yavumela ukuthi kuze kube okwaba iNhlangano Yomhlaba Yohwebo ngenani elikhulu kwizimboni zakhe ezingancintisani kanye nabasebenzi bazo, kanti futhi ngo1995 ezokushintshisana nokulawula kokungena nokuphuma kwezimali kwaqedwa, lokho kwenza ukuthi izicebi zaseNingizimu Afrika zithuthela emazweni angaphandle umcebo wazo omkhulu ezaziwuzuze ngesikhathi sobandlululo.
Ukuxegiswa kokulawula imali engenayo nephumela ngaphandle okwenziwa iBhange Lezwe laseNingizimu Afrika kwaholela ekutheni kuhambe phambili ukutshalwa kwezimali yizimboni zaseNingizimu Afrika ezwenikazi laseAfrika. Kodwa ngonyaka ka2000, ikomkhulu lezimali kwezimboni ezabe zinzinze emadolobheni aseGoli naseKapa - oAnglo American Corporation, DeBeers, Gencor (manje osekungu BHP Billiton), Old Mutual kanye neLiberty Life insurance, SA Breweries (ngokuhamba kwesikhathi yahlanganyela neMiller), Investec bank, Didata IT, Mondi paper, kanye nezinye – zabaleka kulelizwekazi. Lezizimboni ezinkulukazi zaseNingizimu Afrika manje sezibhaliswe eLondon, eNew York naseMelbourne.
Umphumela wokuphumela ngaphandle kwenzuzo, imali engahlanganyelwa emva konyaka ka2000 kuyisizathu esiphambili sokuthi iNingizimu Afrika yabalwa njengeyingozi kakhulu ezimaketheni ezintsha ezivelayo kwezingu17, yiphephandaba iEconomist. Njengoba bekushiwo ekuqaleni, ukuze kwenzeke kuvalwe lelihlazo lemali enkulu ebalekela emazweni aphesheya, okwanyuka kakhulu ngamaphesenti angphezulu kuka20 yemali yesizwe sonke n gonyaka ka2007, esikhundleni salokho kwakweletwa izimali ezinkulu emazweni aphesheya.
Ngalesisikhathi sokwenyuka ngokungabinethemba mayelana nezomnotho, imaphakathi leningizimu neAfrika lalishintsha, ikakhulukazi kwizimpahla okwanyuka ngesivinini kusukela kunyaka ka2002 kuya ku2008. Izwekazi laseAfrika laqhubeka landisa inani lokuhweba kanye namazwe eminotho efufusayo – ikakhulukazi iChina – kusukela kumaphesenti angu5 kuya kwangu20 kukho konke ukuhweba emva kokuba seluphelile ubandlululo (1994-2012). Ngonyaka ka2009, izwe laseChina lase liyidlulile iMelika njengomhwebi ohamba phambili neAfrika. Maduzane-nje emva kwalokho, kucatshangwa futhi kwendlalelwa ubudlelwane obuqinile bezomnotho namazwe eBRICS lokho kwase futhi kuba iyona njongo ebalulekile ePitoli, ngokusho kwesekela likangqongqshe wezangaphandle uMarius Fransman kwingxoxo eyaybanjelwe esikhungweni semfundo ephakeme eStellenbosch ngeBRICS ngonyaka ka2013: ’Iningizimu Afrika futhi ibuye ibe uthelawayeka wesango lokutshala izimali eAfrika, futhi eminyakeni eyishumi ezayo lelizwekazi liyodinga izigidigidi ezingu$480 ukuthuthukisa izinqalasizinda.’
Hayi-nje uthelawayeka wesango, kodwa nabahamba phambili, njengoba uNkoana Mashabane waqaphela kahle, ‘Ngonyaka ka2012, iNingizimu Afrika yatshala izimali kwiAfrika yonke ngaphezu kwelinye izwe emhlabeni wonke’. Ngonyaka ka2010, u17 wezimboni eziphezulu kwezingu20 zazingezase Ningizimu Afrika, ngisho nasemveno kokuthuthela emazweni aphesheya kwemali eminyakeni eyishumi ngaphambilini. Njengoba umbiko wocwaningo olwenziwa imboni iErnst & Young mayelana ne‘Africa Attractiveness Survey’ yaqopha ukuthi, kubongwa izimboni zokumbiwa phansi ngokuqageleka kwazo kanye nemboni yomakhalekhukhwini, iStandard Bank, izitolo zakwaShoprite, ukutshala kweNingizimu Afrika imali mezweni aseAfrika kunyuke ngomaphesenti angu57 kusukela ngonyaka ka2007.
SIFUNDENI NGESIPHIHLI ESENZIWE IMOTO?
Kodwa-ke imiphumela yehlukile. Ukutshalwa kwezimali eCentral African Republic (CAR), ngokwesibonelo-nje, emva kokuba sekwenziwe ubudlelwane obusondelene phakathi kwabantu abambalwa phezulu kwisigungu sikaKhongolose kwikomkhulu layo eChancellor House elitshala izimali. kubhekwa ukuba nesandla ekulawulweni kwamadayimani ngowasezweni laseCAR, uDidier Pereira. Ngonyaka ka2006, lezizivumelwano zenziwa zaba semthethweni ngubudlelwane obabumbandakanya uMbeki. Kodwa ukuphambana kuqhamukile futhi kwajula, ngesikhathi izwe laseFrance liyeka ukuxhasa owayebusa ngendlovuyangena eCAR uFrancois Bozizé. Futhi wayesevakashela ePitoli ezocela usizo oluphuthumayo lezombutho wempi.
Ngenyanga kaJanuary ngonyaka ka2013 uZuma wathumela amakhulukhulu amasosha abezombutho wempi eBangui ukuyohlala isikhathi ayezibophezele sona seminyaka emihlanu inani lokwenza lokhu okwakuqagelwa ukuthi lifike kwizigidigidi ezingu1.28 zamarandi. Sinezimpahla ezidinga ukuvikelwa,’ ngokusho kukasekela ngqongqoshe wezindaba zangaphandle uEbrahim Ebrahim.
Ngeshwa, ngaphambi kosuku lokuthi izitatanyiswa zeBRICS zifike zize kwingqungquthela eThekwini, ngelanga langomhlaka Mashi 25 2013, ngaphezulu kwshumi nambili lezidumbu zatholakala zamasosha aseNingizimu Afrika ezatholakala emva kwempi yezinsuku ezimbili lapho amakhulukhulu ababelwa basendaweni kanye nabangencala babulawa. Amakhulu amabili amasosha ombutho wezempi eNingizimu Afrika ayezama ukuthi avikele izimpahla zaseNingizimu Afrika ebhekene namavukela mbuso enhlangano iSeleka axhaswa izwe laseChad. UBozizé wabalekela lapho wayevikelekile khona kwathi iSeleka yahlasela indlu ayehlal kuyona njengomongameli, ethatha amandla ezwe ngalelolanga khona noma amasosha ombutho wezempi eNingizimu Afrika amadoda ekuthiwa ayekulelalizwe ngokuzolekelela kwezempi futhi ekhokhelwa ngalokho.
Iphephandaba ‘iSunday Times’ lakhuluma nmanye amasosha ezombutho wezempi ababuya bephila: ‘Amadoda ethu ayekhishelwe ezindaweni ezimbalwa edolobheni, evikela izimpahla zezakhamizi zaseNingizimu Afrika. Ibona abokuqala abahlaselwa. Wonke umuntu wayecabanga ukuthi ilabo ababezunyiwe, kodwa kwakungamadoda ayengaphandle kwezakhiwo ezahlukene – lezi okwakungezabahweni baseGoli…Kwaqanjwa amanga...Kwakungafanele sibe lapha. Sasingezanga lapha ukuzokwenza lokhu. Sasitshelwe ukuthi sasizele ukuzovikela nokuzosiza, ukuqinisekisa ukuthula.’
Lesisikhathi esibuhlungu kanje kungase kwenzeka kalula ukuthi ngabe saholela kwisifo esaziwe ngesaseVietnam, lapho emva kokudlula ekuphoxekeni okukhulu ngombutho wezempi, ukuxhaswa ngedumela kwimizamo kahulumeni waseMelika ukuqapha izimpahla zezimboni ezingobhululu bayo. UZuma wabhekana nalesisimo esisixake kanje ngesibindi, kodwa-ke ebiza ‘ngokungenelela okunqunyiwe: ukuthi kube khona abezombutho wempi waseAfrika ehlale ilinde izimo eziphuthumayo.’
Emva kwamasonto ambalwa, wathumela futhi elinye iqembu labezombutho wempi baseNingizimu Afrika abangu1350 ezweni elicebile kwimikhiqizo yendalo embiwa phansi empumalanga neDemocratic Republic of Congo, lokho okwenza lamasosha ahamba enze esinguhafu amasosha eNhlangano Yamazwe Abumbene (UN), kanye namasosha ayephuma emazweni aseTanzania kanye naseMalawi. Kwakuwuhambo lokuqala lweUN lokugcina ukuthula olwaluvunyelwe ukuthi lihlasele, futhi masinya emva kokuba izindiza mshini ezinophephela emhlane zaseNingizimu Afrika ezinamandla omlilo kakhulu (ezintathu okwakungamaRooivalks kanye nezinhlanu ezingamaOryx) zihambisa lamasosha, inhlangano yamavukela mbuso iM23 yavela yazinikela ngenyanga kaOktoba ngo2013.
Ngokusho kwephephanda i‘Jane’s Defence Weekly,’ ‘lezizindiza mshini ezinophephela emhlane zeRooivalks zasebenza kahle kakhulu, zidubula amabhomu amarockets anga mm angu70 ngokubukhulu ubuchwepheshe bokunemba kulabo ababevikela iM23.’ Uma sesibheka kade lendiza mshini enophephela emhlane yayakhelwe ukulwa namasosha aseCuba ngesikhathi kuvikelwa iAngola ngesikhathi sobandlululo, umhlaziyi kulemboni uSimon Shear wathi ngokudabuka, ‘Akufanele sikhohlwe ukuthi iRooivalk, nkengazo zonke ezinye izikhathi ezinobuchule zezwe, yayidalelwe futhi yakhelwe ukulwa nezindluzula zezimpi zemibuso engekho emthethweni.’
Lapho impi eyaybanjelwe khona eDRC, ngokusobala-nje, kwakungekude nalapho umshana kaZuma uKhulubuse waba ngomunye wabanikazi behlelo olukhulu lokubheka ukumbiwa kwamafutha.
Ngakho-ke ngokungabinanembeza kokuqala kabusha ukusabalala ngokubusa kwamanye amazwe, manje kwase kuyisikhathi, sokuhweba, kusho uNkoana-Mashabane: ‘INingizimu Afrika entsha ineminyaka eyishumi nesishagalolunye, kodwa sihlale sibhekene nomlando weqembu lezombusazwe elineminyaka eyikhulu nanye (uKhongolose), Lomkhulu oneminyaka eyikhulu nanye ufuna ukuhamba yonke indawo enza ukuthula.
Lona oneminyaka eyishumi nesishagalolunye kufanele abheke zonke izinhlaka zolobubudlelwane, ofuna ukungabekezeli, futhi bese ethi: Hayi-bo sidinga ukwenza abantu bethu bathole ukuthula”…Izimboni zaseNingizimu Afrika kufanele zize ngamandla, kodwa singenza kangcono uma sihlangene. Lona oneminyaka eyishumi nesishagalolunye oseqala ukubona ukuthi akukho ndawo ngaphesheya kwezilwandle lapho esingaya khona siyokwenza imali, kodwa singakwazi ukwenza imali komakhelwane bethu, kufanele enze umnyakazo ngokushesha’.
Waqhubeka wathi, ‘sesidlulile manje ekukhulumeni, sesiqale ubudlelwane namanye amazwe ngezomnotho kumanxusa ethu. Iphepha lethu elimhlophe kubudlelwane namazwe angaphandle lisho ukuthi amanxusa ethu kufanele adlale indima ebalulekile ukuqhubela phambili umsebenzi wabahwebi baseNingizimu Afrika ngaphesheya kwemingcele yethu futhi bakhe amathuba okutshala izimali kumazwe esibabeke kuwona.’
Emavikini ambalwa ngaphambi kwalokho, uZuma uqobo lwakhe waphumela obala encenga abahwebi baseNingizimu Afrika ukuthi awangenelele kulelizwekazi: ‘Kuhlale kukuhle ukufika laphjo kuqala. Futhi uma singafiki lapho njengabahwebi abangamaAfrika lokho kuyoholela ukuthi abantu abaqhamuka kude kakhulu bafike lapho kuqala, bese siyakhononda emva kwalokho sithi bathanda ukungenelela izindaba zethu.’
Ukuzinikela kwenkulumbuso yaseNingizimu Afrika ukuthi izuze enhla nezwekazi kuhamba ngokukhulu ukushesha, njengoba abahwebi baseGoli befuna amathuba amasha ikakhulukazi kwezokumbiwa phansi, ukudayisa, amabhange, utshwala, ezokwakha kanye nezokuvakasha. Izimboni ezinkulukazi zaseNingizimu Afrika zazuza ngokukhululwa kwezimali eAfrika okugqugquzelwe kakhulu iPitoli, ukuze lenze inzuzo kalula.
UKUFIKA KWEBRICS E-AFRIKA
Ngabe iBRICS izofika namuphi umehluko kulobubudlelwane? Ngakolunye uhlangothi, kwakuzoba khona ingcindezi ngokuncintisana okukhulu okudalwe ukuhwebelana kanye nokutshala izimali. Lokhu kwaba kubi kakhulu phakathi nonyaka ka2013 ngobudlelwano bokulanda izinkukhu kusukela eBrazil, njengesibonelo, ukuthi ungqongqoshe wezohwebo waseNingizimu Afrika uRob Davies wabeka imali ekufanelwe ikhokhwe yentela engamaphesenti angu82, efaka umbuzo okuthi empeleni, ngabe iBRICS yabe iwuhlaka lwabangani beqiniso.
Jikelele-nje, kodwa-ke, ukwenza kuqhubekele phambili ukumba phansi ukuze kuzuze iNingizimu Afrika, iNational Planning Commission yathi, ‘Amanxusa ezwe kufanele asebenze ngokusondelana nabaholi bezimboni nabahwebi, bese kuthi izikhungo zemfundo, ulwazi kanye nezokucwaninga, kube yize ezidala amathuba obudlelwane nezinye izinhlaka ezifana nalezi zamazwe aseBRICS… UMnyango Wezindaba Zangaphandle, ngokusebenzisana nezikhungo zokucwaninga kanye nezezifundiswa eNingizimu Afrika, kufanele bahole uhlelo olucabangiwe ukusebenzisana neChina mayelana nemikhiqizo ewuketshezi, ezokumbiwa, ukucwaninga kanye nokuthuthukisa kanye nokwandisa izinqalasizinda kulelizwekazi.’
Lekhomishani futhi yanxenxa ukuthi iPitoli ‘iqinise ezomnotho kumanxusa futhi yakhe ubudlelwane obunomphumela kanye nezimboni zangasese kanye nezikahulumeni. Ezindaweni ezifana nobuchwepheshe, ezamaciko, imfundo ephakeme, ezemidlalo kanye nokuvikelwa kwezemvelo, kunesidingo sokukhombisa ngeNingizimu Afrika nokugqugquzela ubuyona kanye nokbuholi bayo kwizindaba ezibalulekile njengegxenye ‘yamandla ayo athambile’ kubudlelwane namazwe angaphandle, ngaphandle kokungakhohlwa ukuthi kufuneka kunyuke nenani lamandla engqondo – ukukwazi kwamazwe ukukhombisa ukuzithiba mayelana nokuphunyuka ngezemiphefumulo futhi igcine umnqondo ophusile ekuzwaneni nabanye ngesikhathi kwizingxoxo namazwe angaphandle, nangakho konke.’
Manje-ke kuthiwani n gemali yaseGoli? ‘Hlanganisani umphakathi wabahwebi kubudlelwane namazwe aphesheya. Amanxusa kungenzeka asayine izivumelwano namazwe angaphandle, kodwa izimboni zangasese okuyizo ezihweba ngale kwemingcele yethu. Izinga eliphezulu labahwebi baseNingizimu Afrika lidinga ukusondelana kakhulu kubudlelwane namazwe angaphandle. Ibona abahamba phambili ekudaleni umcebo. Abahwebi bemiphakathi basendaweni bazimisele ukuletha izifundiso zokulawula kanye nokwakha izinhlaka zokuhweba kwizizinda zaseNingizimu Afrika kwisifundazwe saseningizimu neAfrika. Isidingo okufuneka ukuthi sibhekelelwe kakhulu.’
Ukukhathazeka mayelana nelesisimo kwazwakaliswa ngowezombusazwe osemdala waseNamibia ohlaziya ezombusazwe ngezomnotho uHenning Melber sekuphela unyaka ka2013, ngoba iPitoli ‘livikele izimboni zalo lacekela phansi izimboni ezisafufusa kwamanye amazwe. Kodwa-futhi izimboni zaseNingizimu Afrika ngolukhulu unya zacekela phansi uhwebo lwasendaweni ukuze zilawule ukusetshenziswa kwemithetho ezizweni ezisesifundazweni saseningizimu neAfrika. Angizange ngibe nokungabaza ukuthi uthando lweNingizimu Afrika kwezomnotho kwakungukufuna lokhu. Vele, ngomcabango wami njengowesizwe saseNamibia sesibuswa iNingizimu Afrika futhi sibe ngumngani kulokhu kubusa ngokusabalala.’
Ukukhombisa lokhu singakhuluma ngokwenzeka ngonyaka ka2012, olunye uhlaka olubuswa iGoli iRand Water elaphoqwa ukuthi lithuthe eGhana emva kokwehluleka – luhambisana nebhululu walo wasezweni laseHolland (iAqua Vitens) – ukwenza ngcono ukulethwa kwamanzi eAccra. Lokhu kwalandelwa ukuxoshwa eMaputo (kweSaur yaphindiselwa eParis) kanye naseDar es Salaam (iBiwater yaphindiswa eLondon). IRand Water yayilokhu ithi ukuba khona kwayo eGhana kwakuyingxenye yokuhlanganyela kweNepad kanye neMillennium Development Goals ukwandisa ubudlelwane phakathi kwezangasese nasemphakathini ekulethweni kwamanzi.
Kodwa lokukweyisa kwakuyiqiniso mayelana nabalawuli basePitoli, ngokusho kweNational Planning Commission: ‘Ezinyangeni eziyisithupha zokuxhumana, iNPC yahlangabezana, kanyekanye nokubukwa kwezwe njengeziqhwaga kwisifundazwe saseningizimu neAfrika. kanti futhi ababhali bemigomo baseNingizimu Afrika bajwayele ukungabi nalwazi olujulile mayelana nezombusazwe zebalazwe laseAfrika’.
Lombono wesiqhwaga sesifundazwe seningizimu neAfrika sizwakale kakhulu ngenyanga ka0ktoba ngo2013 ngesikhathi, kunengxoxo esikhungweni semfundo ephakeme eWitswatersrand mayelana nomgwaqo omusha okhokhelwayo kuthelawayeka osuka eGoli uya ePitoli, uZuma wavikela lokukwenza kwakhe engxenye ngasese ngokusebenzisa amazwi anganambithekisanga kahle: ‘Asikwazi ukucabanga njengabaseAfrika eAfrika.
Akuwona umgwaqo kazwelonke waseMalawi.
Lokhu-ke, mayelana nolo mbhalo: ukutshalwa kwezimali iBRICS eAfrika okwendlalelwe ngabase Ningizimu Afrika ukubumbana nabantu ababafukamela ngesikhathi belwa nobandlululo manje sekungukubukelwa phansi kanye nokusetshenziswa ngabangakuzuza kwezomnotho.
Kodwa-ke amazwe eBRICS, anazo izishoshovu ezisebenza kanzima mayelana nezimpilo zazo kanye nezabanye, futhi umqondo webrics esuka kubantu ijabulisa imilando yobumbano kwabaseNingizimu okufanele siqhubeke nokukukhuthaza. (Lezizibonelo zisetshenziswe embhalweni wami kwimigqa yokugcina lapho ngibhale khona ‘ngokusabalaliswa kokubusa’.)
Kodwa-ke abantu okufanele babange umsindo, yizilulu zeBRICS ekutshalweni kwezimali kwezokumbiwa phansi okufanele basibizele ukubumbana, njengoba abseZimbabwe benzenjalo kithina eThekwini n gonyaka ka2008, ngesikhathi umkhumbi wasezweni laseChina owawomumethe amabhulethi ayizigidi ezintathu ayethengwe nguhulumeni kaMugabe (ngesikhathi esibalulekile sokhetho) ufika echwebeni lethu. Sibonga-ke ukuhlukahlukana kokubumbana kwethu, izishoshsovu ikakhulukazi inyunyana yabasebenzi bezithuthi eyalwa ukuthi lomkhumbi ungazithululi lezizikhali eThekwini ngisho nakumanye amachweba esifundazweni seningizimu neAfrika.
Umqondo webric s eqhamuka kubantu kufanele, iqale ngokuhlaziywa, kanye nesithombe sosizi esidwetshwe ilombhalo kanye nezinye zonke izithombe zokutshontshwa eAfrika ozithola kulamakhasi, okufanele kube nokucabanga okugxekayo kanye nezindlela zokuzabalaza.
*UPatrick Bond ungumqondisi weCentre for Civil Society esesikhungweni semfundo ephakeme eNyuvesi YaKwaZulu-Natali; ezinye zezincwadi zakhe Ubulungiswa Bezombusazwe Ngesimo Sezulu (phecelezi Politics of Climate Justice ( eshicilelwe ngonyaka ka2012), Ukuntshontshwa KweAfrika (phecelezi Looting Africa (eshicilelwe ngonyaka ka2006) kanye nasanda kuyibhala kanye no( John Saul) INingizimu Afrika – Umlando Wamanje (phecelezi South Africa – The Present as History) etholakala esifundazweni seNingizimu n eAfrika kwaJacana.